Nagu saabsan - HEBEI DEBIEN TECHNOLOGY CO., LTD
Sanadihii la soo dhaafay, Debien wuxuu markhaati ka ahaa wacyiga sii kordhaya ee injineernimada iyo duurka caalamiga ah, wuxuu aasaasay xiriir wadashaqeyn muddo dheer iyo xasiloon oo lala yeesho shirkadaha caanka ah iyo kooxo dhowr ah oo heer caalami ah sida batroolka, batroolka, ilaalinta biyaha iyo birta aragtidiisana ka dhigtay mid dhab ah . Debien waxay muhiimad siineysaa adeegyada iibka kadib, waxay sii wadaa inay hagaajiso habka adeegga iibka kadib: waa falsafadda adeegga Debien waa inay ku ekaato macaamiisha oo ay bixiso adeegyo degdeg ah oo tayo leh. Waxaan ballanqaadeynaa inaan marwalba diyaar u nahay inaan caawinno meel kasta oo aad joogto.
Isbedelo aad u baaxad weyn ayaa ka dhacay warshadaha wax soo saarka Shiinaha iyada oo lagu gudajiro howlaha kala guurka ee bulshada Shiinaha oo ka socda horumarka xawaaraha sare leh iyo horumarinta tayada sare leh. Warshadaha waxsoosaarka ayaa qaata fursado horumarineed oo aan horay loo arag. Si kastaba ha noqotee, caqabadaha imanaya ayaa sidoo kale muhiim u ah shirkad kasta. Debien waxay istiraatiijiyaddii u beddeshay inay ka beddesho horumarka xawaaraha sare leh ee 20 sano ka badan iyo horumarinta tayada sare leh; oo laga beddelo soo-saaraha weyn ee Shiinaha ee soo-saaraha ugu xoogga badan ee Shiinaha, inta lagu guda jiro, xarumaha Debien ee tayada leh, ujeeddadeedu tahay adeegga macaamiisha oo tayo leh, casriyeynta ganacsiga ee ka soo horjeedka aasaaska "Made in China 2025", "Industry 4.0" iyo tilmaamaha hal-abuurnimo farsamo, horumar cagaaran, horumar waara, horumar ku wajahan dadka. Waxaan aaminsanahay in Debien uu ka dhex muuqan doono warshadaha wax soo saarka ee Shiinaha isagoo wata summad cusub mustaqbalka dhow.
Debien wuxuu higsanayaa meel sare wuxuuna qaataa dhammaan noocyada kala duwan. Waxay soo jiidataa maskaxda ugu fiican adduunka oo idil iyadoo leh heer sare oo loo dhan yahay waxayna siisaa marxalad loogu talagalay dadka ujeeda ujeedada leh riyooyin iyo riyooyin si ay u muujiyaan kartidooda ayna u horumariyaan is-qiimeynta. Mabda'a ah "iimaan wanaagsan iyo tayo marka hore", waxaan saaxiibo ka leenahay adduunka oo dhan waxaanan soo dhawaynaynaa saaxiibo badan oo ku soo biira Debien oo gacmaha is qabsada mustaqbal wanaagsan.